Ogaden News Agency (ONA) – Mrs. Hillery Clinton – Qabashada Bagbo waa dhambaal ku socda kali-talisoo idil
Mrs. Hillery Clinton – Qabashada Bagbo waa dhambaal ku socda kali-talisoo idil
Daqiiqad wax ka yar oo loo ogolaaday TV-ga dalka inuu ka hadlo ayuu Lauren Gbagbo M/w horee dalka Ivory Coast ee diiday in doorashada lagaga guulaystay wuxuu ka codsaday taageerayaashiisi inay joojiyaan dagaalka oy hubka dhigaan. Maalin ka hor ayuu isla isaga wuxuu kula dardaarmayay ciidankiisii ku xeernaa inay dagaalamaan ilaa ninka ugu dambeeya uu ka dhinto. Dabeecadaha Kali-taliska ayay ka mid tahay inuusan waaqica marnaba aqoonsanin ilaa daqiiqada ugu dambaysa xukunkiisa.
Sida lala wada socdo doorashadii ka dhacday dalkaa ayuu caalamka dhamaantii wada aqoonsaday in lagaga guulaystay Gbagbo hasa ahaatee waxaa arintaa diiday oo ka doorbiday dagaal iyo in la burburiyo dalka isaga iyo intii ku xeernayd ee gacanta ku haysay dhaqaalaha dalka ivory Coast ee hudanka ku ah geedka loo yaqaano Cocoa-ga ee laga sameeyo shukulaatada iyo waxa la halmaala. Dalkan ayaa ka mid ahaa dalalka ugu dhaqaalaha roon Afrika.
Dadka Ivory Coast oo lagu qiyaaso inay dhan yihiin 20 Milyan ayaa qlibiyadooda ay yihiin muslimiin waqooyiga dalka dagta, diinta ku xigtaan waa masiixiyadda Roman Catholic. Dagaal sokeeye oo dhiigbadan uu ku daatay ayaa ka qarxay 2002dii kaasoo lagu soo afjaray dawlad wadaag ah 2007dii, iyo in la qabto doorasho caalamka uu ka yahay ilaaliye. Dooarsahadaa oo dhowr jeer dib loo dhigay ayaa la qabtay 2010, kaasoo goobjoogayaashii ay dhamaantood isla qireen inuu ku guulaystay M/Weyne xassan Watara oo ah nin aqoon fiican leh in badanna ka soo shaqeeyay ururo caalami ah. Lauren Gbagbo ayaa ku gacan saydhay isla markaana dagaal ku qaaday meelihii ay fadhiyeen ciidamada taageera Mr. Watara. Dagaal aan waxba la’isula hadhin ayaa ka qarxay oo caalamka badankii uu taageeray M/W Xassan Watara, iyadoo dhamaan dhaqaalihii laga jaray Gbagbo iyadoo waliba la xanibay lacagihii u yiilay dalka dibadda inuu la soo boxo. Ciidanka Faransiiska oo saldhig ku leh dalka Ivory Coast ayaa markuu dagaalka soo gaaray caasimada Abidjan faraha la soo galay oo dayaarado ku burbiriyay tiknikadii Lauren Gbagbo.
Dhamaan madaxda caalamka ayaa taageeray qabashada la qabtay ninkan macangaga ah ee diiday inuu u hogaansamo rabitaanka shacabkiisa. M/Weyne Obama ayaa soo dhaweeyay kuna tilmaamay qabashadiisa inay tahay guul uu gaaray shacabka Ivory Coast oo dhibaato badan kala kulmay Gbagbo siduu yidhi Obama.
Waxaa ugu hadal fiicnayd Wasiiradda Arimaha Dibadda Mareykanka Mrs. Clinton oo tidhi; Qabashada Gbagbo waxay fariin u tahay dhamaan xukuumadaha kalitaliska ah ee caalamka ka jira inay la kulmi doonaan cawaaqib la mid ah hadday diidaan rabitaanka shacabkooda.”
Banaabaxyada dunida dacaladeeda ka socda ee lagaga soo horjeedo maamulka KT Meles Zinawi ee mudada 20ka sano ah kolba shaatiga u badalanaya, waxaa hubaal ah inay arintan iyo guuda ahaan waxa ka socda dalalka carabta u tahay fariin. Hasa ahaatee maamulada kali-taliska ayaan iyagu marnaba ku wacyi qaadanin ilaa birta la saaro oo xaalkoodu wuxuu la mid yahay – Wanka ilaa la gowraco indhiiisa cirka ma arkaan -.
Gbagbo waa lagu sugay waxa lagu sameeyeyna waa tallaabo wanaagsan, isaga waxay ku tahay sharaf dhac waxa uu usoo joogey gola ceebeed, kkk subxaanallaah, balse waa wax uu mutaystay.
dhiigyacab zinawi ayaa ah ka u horeeya eey tani cashir u tahay.